Kenya oo ka Cabsi qabta weerarro lagu Qaado Jaamacadaha – Radio Daljir
Kenya oo ka Cabsi qabta weerarro lagu Qaado Jaamacadaha
Oktoobar 31, 2015 4:47 b 0
Oktoobar 31, 2015 (Daljir) — Hogaamiyayaasha ardayda jaamacadda MOI ee galbeedka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in boqolaal kamid ah ardayda jaamacadda uu soo wajahay welwel ay ka qabaan weeraro kaga yimaada ururka Alshabaab.
Xubno katirsan ardayda jaamacadda MOI ayaa lasheegay inay degeen meel ka baxsan qeybta ay Jaamacada ka dhigtaan ee magaalada Eldoret kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in afar arday oo la waayay ku biireen ururka Alshabaab.
Alex Mbungua, oo kamid ah ardayda dhigata jaamacada Moi ee dalka Kenya ayaa sheegay in Alshabaab ay sheegteen masuuliyada weerarkii 2 April ka dhacay jaamacada magaalada Garisa, taasina ay muujinayso inay weerar kusoo qaadi karaan.
Richard Mibey oo ah kuxigeenka jaamacadda ayaa sheegay in afarta ardayda ee la waayay ay ku hanjabeen iney weerar ku qaadayaan jaamacada Moi, taasi oo cabsi ku abuurtay ardayda dhigata jaamacada.
Kudhowaad 30,000 oo kamid ah ciidamada wadanka Kenya ayaa lageeyey jaamacadda Eldoret inkastoo aysan taasi weli qaboojin cabsida ay ardaydu ka qabaan weeraro kaga yimaada Alshabaab.
Maamulka Degmada Bargaal oo ka Cabasho ka Muujiyay Jariifka Badda lagu hayo
Puntland oo ka Qayb-gashay shir looga hadlayay Shidaalka Africa oo ka dhacay Cape town